Sunday July 08, 2018 - 20:51:15 in Wararka by Super Admin
wadanka Jabaan warar la helayo ayaa sheegaya in ugu yaraan, 40 qof ay geeriyoodeen kudhawaad boqol kalena la la'yahay kadib roobab xoogan oo halkaas ka da'ay saacidihi lasoo dhaafay.
Roobabka xoogooda ayaa ka da'aya deegaannada dhaca bartamaha iyo galbeedka wadanka Jabaan, si gaar ahna waxa ay u halakeeyeen Magaalooyinka, Heroshima, Okayama, Kiyutu iyo deegaana kale.
Dadka dhintay ayaa la sheegaya in ay qaadeen daadadka roobka halka qaarkoodna uu dhulka la go'ay, illaa hadana roobabku ay yihiin kuwa halkooda kasii socda oo aan kala go' lahayn.
Saraakiil katirsan dowladda Jabaan ayaa sheegay in illaa hadda ay xaqiijiyeen dhimshada 79 qof oo siyaaba kala duwan roobabku u dileen saacidihii lasoo dhaafay, sidoo kalena la la'yahay dad gaaraya 50 meeya ruux oo aan la ogayn halka ay ku dambeeyaan.
Balse warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegeysa in dhimashada intaas ay ka badan tahay oo ay gaareyso ilaa 78 qof sidoo kalena ay maqan yihiin dad ku dhow boqol kale, waxaana la leeyahay waa markii ugu horeysay oo roobab sidaan u xoogani ay ka da,aan dalka Jabaan tan iyo sanadkii 1976dii.
Tv-ga NHK oo hoostaga xukuumada jabaan ayaa sheegay in dad gaaraya 1.6 Milyan oo qof ay ka barakeceen guryahooda, kuwaas oo lagu guuleystay in lagasoo daad gureeyo goobaha ay roobabku sida daran kaga da’ayaan.
Raisal wazaaraha dalka Japan Shinzu Abe ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray golaha waziirada dowlada, si ay uga wada hadlaan xaaladaha kusoo kordhay deeganada dhaca bartamaha iyo galbeedka dalka, wuxuuna ugu baaqay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii dadkaas dhibaateysan loogu gurman lahaa.
Hey,ada la socodka cimilada ee wadanka Japan ayaa digniin hor leh u dirtay dadka ku dhaqan Jazeerada Hunshu, kuwaas oo looga digay roobab wata dabeyla xoogan oo dhankooda kusoo socda, kuwaas oo ay suurta gal tahay in saacadaha soo socda ay halkaas ku dhuftaan.
Madaxda dalka Jabaan ayaa sheegaya in dhibaatada ugu xoogan ee hada ay wajahayaan ay tahay Dhul Go, go,a, fatahaada wabiyada, iyo dabeylo xoogan oo roobabku ay wataan, waxa ayna sheegayaan in magaalooyinka qaar biyaha ay kor udhaafeen 1 Mitir oo dhirir ah.